I-Tojeira Suite - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAna
I-T0 esandul 'ukulungiswa, ekwenza uzive uthe zava ngebhedi elala abantu ababini, igumbi lokuhlala, ikhitshi elincinci negumbi lokuhlambela. Ifunyanwa e-Eiras, i-Tojeira Suite ilungele abo bafuna ukubona ubuhle besixeko saseCoimbra okanye embindini wePortugal. Malunga ne-100M ukusuka kwi-Suite uza kufumana indawo yokoja kwaye, iselumelwaneni, ivenkile enkulu, indawo yokuthengisa amayeza kunye nendawo yokuthenga eneevenkile ezininzi. Ngaphantsi kwemizuzu eyi-5 uza kufumana indlela yokungena kwindledlana enkulu kunye ne-IP3.
I-Tojeira Suite yindawo evulekileyo, ehonjiswe ngesitayile esincinci kwaye igcwele ukukhanya kwemvelo. Kuqoqoshiwe, sibeka phambili ukucoceka ukuze uyisebenzise kakuhle le ndawo. Ikhitshi elincinci linezixhobo ezitsha ezikhoyo, phakathi kwazo: ifriji, i-microwave, ioveni encinci, umatshini wokwenza ikofu neketile yombane. Ungasebenzisa nezitya, amacephe, iiglasi, iimagi neekomityi zekofu ngexesha lokuhlala kwakho.
4.86 out of 5 stars from 85 reviews
4.86 · Izimvo eziyi-85
I-Tojeira Suite ikwisitrato esipholileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ana
iyonke ifumaneka ukuze ikuncede ngayo nantoni na efunekayo
Inombolo yomthetho: 107990/Al
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Eiras